Mampaneno lakolosy | NewsMada
Zandary telo lahy tratran’ny fanafihana tampoka sy vela-pandriky ny andian-jiolahy nitam-piadiana mahery vaika, tany amin’ny kaominina Ambohibary Vohilena, Ambatomanoina. Indrisy fa namoy ny ainy ny iray, izay voatifitra avy ao an-damosiny. Mbola manaraka fitsaboana eny amin’ny Hopitaly miaramila ny roa lahy izay samy naratra tamin’izany. Mandeha koa izao ny fanadihadiana momba ny nahafaty ny polisy iray, anisan’ireo olona telo hita faty nandritra iny fetin’ny Krismasy teo iny, teto an-drenivohitra. Tany Toamasina, tranona zandary mihitsy no notafihina sy norobain’ny andian-jiolahy nirongo basy. Ny fanakanan-dalana sy fanafihana taksiborosy any amin’ny lalam-pirenena any moa dia zary tranga mahazatra ny maro. Misento tokana rehefa tsy sendran’ny loza eny an-dalana sy tonga amin’ny toerana haleha.
Inona no tiana hahatongavana amin’izany ? Mbola manjaka ny tsy fandriampahalemana. Vao mainka mirongatra sy miseho amin’ny endriny mahery vaika mihitsy aza. Efa fihantsiana mihitsy mantsy no azo ilazana irery tranga nihatra tamin’iretsy mpitandro filaminana voalaza etsy ambony irety. Raha ny mpitandro filaminana; zandary, polisy… mitana fitaovam-piadiana, efa manana ny traikefa sy efa matihanina amin’ny asany aza, izao no zava-misy sy manjo azy. Mainka fa ny olon-tsotra, tsy tanana handrangotra, tsy tongotra hitsipaka, tanam-polo… Tantaraina ireny trangana fanafihan-jiolahy ireny ka toa ohatran’ny mora, fa alao sary an-tsaina ny tebiteby, ny tahotra amin’ireo olona iharany sy miatrika izany any rehetra any.
Ankoatra ny mbola fihanaky ny kolikoly,… nampaneno lakolosy indray ny Fivondronamben’ny Eveka tamin’ny hafatra Noely nataony farany teo fa mbola manjaka ny tsy fandriampahalemana. Tenin-dray aman-dreny, antson’ny “manam-panahy” ara-bakiteny izany, ka asa na hotafapaka any am-pon’ny mahalala. Any amin’ireo tompon’andraikitra be galona sy be kintana marobe eto amin’ny firenena.